IArtemis Seafront-Luxurious Apts 5
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArtemis
UArtemis ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Iiflethi zanamhlanje kunye nezitofotofo ze-2, ezinombono womlingo wolwandle lwaseKretan. Yonwabela imfihlo yasePetres beach kunye neencasa zemveli zeMimi's Tavern yethu, kumgama weemitha nje!
Ijikelezwe lulwandle kunye neentaba, iArtemis Seafront Apartments ikubonelela ngendawo yokuhlala ezolile kwaye yabucala, ePetres, iikhilomitha ezili-10 ngaphandle kweRethymno, iikhilomitha ezingama-29 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseChania. Ngaphakathi kwendawo, isikhululo sebhasi siya kukusa kunye nokusuka eRethymno, eChania naseHeraklion.
Iindwendwe zingonwabela iilwandle ezixhaphakileyo kunye nezinesanti ukusuka ePetres, yonke indlela eya eGeorgioupolis, 10 km kude. Indawo yethu yokutyela ekwisiza, i-Mimi's Tavern, ibonelela ngokutya kwamaGrike. Kukwakho neziko lokuntywila elikumgama nje oyi-300 m.
IApartment 5 yindlu enegumbi elinye elinegumbi lokuhlambela elinye kunye nekhitshi elinye, elinezixhobo zekhitshi ezibalulekileyo. Onke amagumbi ethu akumgangatho ophantsi kwaye onke aneebhalkhoni / iiterras ezinombono wolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Artemis
Inombolo yomthetho: 1041K112K2838201
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Petres